Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 26)
Levi's Commuter ee Google, jaakad ugu horeysay smart
Google iyo Levi micno buuxa ayey siinayaan erayga la xiran karo, Levi's Commuter waa jaakad xariif ah oo ugu horeysa ee la falgasha casrigaaga
Huawei Mate 10 Lite ayaa horeyba uga soo muuqan lahaa Shiinaha magaca Huawei Maimang 6
Huawei Mate 10 Lite oo in badan la sugayay ayaa durba ka soo muuqan karay Shiinaha iyadoo la adeegsanayo magaca Huawei Maimang 6 ka hor inta uusan dunida inteeda kale u soo bandhigin.
FCC waxay soo bandhigeysaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Google Home Mini
Dukumiintiga FCC wuxuu bixiyaa qalab sharraxaaddiisa iyo aqoonsikiisu si fiican ula mid noqon karo xanta Google Home Mini.
Turjumaanka WT2, waa mashruuc aan caadi aheyn oo camiran
WT2 wuxuu noqon doonaa turjubaanka ugu fudud ee jeebka loo isticmaali karo, laba maqal oo isla mar ahaantaana u turjumaya wada hadal kasta ilaa lix luqadood oo kala duwan
LG si ay u noqoto soo saaraha ugu weyn ee bandhigyada OLED
LG wuxuu noqonayaa soosaaraha ugu weyn ee kumbuyuutarrada casriga ah iyada oo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadeeda OLED oo ay qaadi doonaan afar shirkadood oo waaweyn
OUKITEL K10000 MAX wuxuu baabi'iyaa kuwa la tartamaya
Imtixaan cusub, OUKITEL K10000 wuxuu wajahayaa iPhone 7 PLus iyo iPad Mini 4, wuxuu sii labanlaabayaa muddada baytariyadooda
Waxaan horeyba u haysanay taariikh aan kula kulanno Google Pixel 2 iyo Pixel XL 2
Bandhig cusub ayaa ku biiraya jadwalka mashquulka ah toddobaadyadii la soo dhaafay, Oktoobar 4 waxaan lahaan doonnaa Google Pixel 2 cusub iyo Pixel XL 2
Geekbuying wuxuu ku bixiyaa qiimo aan caadi aheyn
Halkan waxaan kaaga tagayaa isku duwidda waxyaabaha ugu fiican ee Geekbuying ee qiimaha aan caadiga ahayn, dalabyada xaddidan labadaba waqtiga iyo qaybaha la heli karo.
Kani waa Xiaomi Mi Mix 2 oo uu naqshadeeyay Philippe Starck
Shirkada tiknoolajiyadda ee Shiinaha ayaa soo saartay Xiaomi Mi Mix 2, oo ah jiilka labaad ee taleefankiisa gacanta ee aan xaddidaneyn oo uu naqshadeeyay Philippe Starck
Dib-u-eegista fiidiyowga Bluboo S1, Terminal kale oo aan qiimo jabanayn oo qaab-dhismeedkiisu aad u soo jiidasho badan yahay
Dib u eegis fiidiyow oo dhameystiran ee Bluboo S1, Doogee MIX clone oo kaa yaabin doonta qaabkeeda quruxda badan, qeexitaannada farsamo iyo waxqabadka weyn.
Banggood Sannad guuradii 11aad ee Taleefannada casriga ah
Halkan waxaad ku uruurineysaa heshiisyada ugu fiican ee casriga ah ee aan ka heli karno sannad-guurada 11aad ee Banggood.com
OUKITEL waxay tijaabisaa nolosha batteriga OUKITEL K3
OUKITEL K3 hadda waa la heli karaa si loo keydiyo oo soo-saaruhu ugu dabaaldego isaga oo daabacaya tijaabinta iska caabinta bateriga si uu u muujiyo is-maamulkiisa
Khilaafka kaamirada LG V30 wuxuu leeyahay sharraxaad fudud
Dhowr maalmood ayaa loo maleynayay in furitaanka f / 1.6 ee kamaradda LG V30 uu ahaa been abuur baahin ah sababo la xiriira qabashooyin kala duwan oo ka soo baxay webka.
Kani waa Xiaomi Mi A1 cusub oo leh daahir Android
Shirkadda weyn ee Shiinaha ayaa soo bandhigtay taleefankeedii ugu horreeyay ee Android One, oo ah Xiaomi Mi A1, kaas oo la iibin doono Isniinta soo socota qiime aad u soo jiidasho leh
OUKITEL K10000 MAX wuxuu shaqeyn doonaa 1 usbuuc iyadoo habka dhaqaalaha la shaqeysiiyay
OUKITEL K10000 MAX waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan ee leh batteriga ugu weyn adduunka, haddana ismaamulkiisa ayaa tijaabo lagu sameeyay.
Faahfaahinta Xiaomi Mi Mix 2 horey ayey ujirtay waxayna tilmaamaysaa mid ka mid ah taleefannada Shiinaha ee ugu wanaagsan 2017
Faahfaahinta Xiaomi Mi Mix 2 ayaa horeyba looga heli karaa khadka tooska ah waxayna tilmaameysaa mid ka mid ah taleefannada Shiinaha ee ugu wanaagsan 2017.
Dib u eegis Leagoo T5
Dib u eegis fiidiyow ah oo dhameystiran ee Leagoo T5, oo ah terminal aan ku raaxeystay tijaabinta in kabadan 15 maalmood waana ikhtiyaar iibsi aad u wanaagsan.
Processor Kirin 970 wuxuu burburin doonaa Samsung iyo Apple, sida ay sheegtay Huawei
Huawei waxay hubineysaa in Mate 10 iyo Mate 10 Pro ee soo socda ay la imaan doonaan processor Kirin 970, oo bixiya tikniyoolajiyad cusub iyo waxqabad aan caadi ahayn.
HTC U11, dareenka ugu horreeya
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib tijaabinta HTC U11 ee IFA ee Berlin. Taleefan leh naqshad gaar ah oo soo jiidan doonta indhaha oo dhan.
OUKITEL K3 iyo Sony Xperia XZ Premium, waa laba taleefannada casriga ah oo isku mid ah laakiin kala duwan
OUKITEL K3 cusub waa taleefan casri ah oo aad ugu eg Sony Xperia XZ Premium qaabeynta iyo qeexitaanka, laakiin sidoo kale aad ayuu uga duwan yahay, gaar ahaan qiimaha
Huawei Mate 10 iyo Mate 10 Pro ayaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 16 iyada oo la siin doono processor-ka cusub ee Kirin 970
Huawei Mate 10 iyo Mate 10 Pro ayaa lagu soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar 16 magaalada Munich waxaana ku jiri doona processor-ka cusub ee Kirin 970 oo leh awooda AI.
Huawei Nova 2, dareenka ugu horreeya
Muuqaalka ugu horeeya ee fiidiyowga kadib tijaabinta Huawei Nova 2. xubin cusub oo katirsan qoyska Nova 2, oo leh jir laga sameeyay aluminium iyo qalab awood badan.
Huawei Nova 2 Plus, waxaan ku tijaabinay IFA 17
Dareenka ugu horreeya ka dib tijaabinta Huawei Nova 2 Plus, taleefan leh shaashad 5.5-inji ah oo leh xallinta Full HD iyo jir bir ah
Honor Magic, dareenka ugu horreeya ee IFA 2017
Muuqaallada ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib markii lagu tijaabiyay Honor Magic gudaha Huawei iyo Honor waab ee IFA Berlin. Telefoon kaa duwan oo kaa yaabin doona
Dareenka ugu horreeya ka dib isku dayga Moto G5S Plus, nooca fiitamiinnada ugu badan ee qoyska Moto G oo u muuqda shaashadiisa xoogga leh ee 5.5-inji ah.
Dareenka ugu horreeya ka dib tijaabinta Moto G5S ee IFA ee Berlin, Motorola's telefoonka cusub ee Moto G oo leh aluminium aluminium ah.
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib tijaabinta Moto X4 ee IFA 2017 ee lagu qabtay magaalada Berlin. Dhex dhexaad la yaab leh.
Dareenka ugu horreeya ka dib markii lagu tijaabiyay Sony Xperia XZ Premium gudaha Sony-ka istaaga IFA ee Berlin, taleefan leh shaashad 4K iyo kamarad 19 mpx ah
Sony Xperia XZ1, rayi ugu horeysay
Dareenka ugu horreeya ka dib tijaabinta Sony Xperia XZ1, taleefanka cusub ee soo saaraha Japan oo leh kamarad cajiib ah
Waxaan ku tijaabinay fiidiyowga Sony Xperia XZ1 Compact, taleefanka cusub ee Sony ee lagu soo bandhigay IFA ee magaalada Berlin taasina waxay dhadhamineysaa dhadhan qadhaadh oo afkeena ah
LG V30, dareenka ugu horreeya ee IFA 2017
Dareenka ugu horreeya ka dib tijaabinta LG V30, calaamadda cusub ee LG oo u taagan shaashadeeda xoogga leh ee 6-inji oo leh 18: 9 muuqaal
Kani waa LG V30 cusub
South Korea LG waxay ku soo bandhigeysaa LG V2017 cusub IFA 30, oo ah taleefan casri ah oo shaashad weyn leh oo loogu talagalay inuu ku raaxeysto waxyaabaha ka kooban warbaahinta
Palm wuxuu ku laaban karaa suuqa isagoo wata qalab cusub sanadka 2018
Shirkadda Shiinaha ee TCL, oo ​​iska leh calaamadda Palm, ayaa bilaabi karta aalado cusub oo mobiil ah oo leh magacan sanadka 2018, sida ay sheegtay IFA 2017.
BlackBerry «Krypton» ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar iyada oo la iska caabin doono biyaha
TLC, oo ah milkiilaha xuquuqda wax soo saarka ee magaca BlackBerry, ayaa dhawaan ku dhawaaqday BlackBerry-kii ugu horreeyay ee aan biyuhu lahayn.
LG V30 wuxuu noqon karaa mobilada leh codka ugu fiican suuqa
LG wuxuu ku faanaa nidaamka dhawaaqa calankiisa cusub, LG V30, kaas oo keenaya HiFi Quad DAC audio chip, miirayaasha dhijitaalka ah iyo barbaraha.
Moto G5S iyo G5S Plus taleefannada gacanta ayaa yimid Hindiya
Lenovo - Motorola waxay si rasmi ah u sii deyneysaa aaladeeda casriga ah ee dhexe, Moto G5S iyo Moto G5S Plus ee Hindiya
Moto X4 waxaa lagu dhawaaqi karaa bisha Sebtember 2
Motorola waxay ku soo bandhigi kartaa Moto X4 laba kamaradood xaflad saxaafadeed oo ka socota Filibiin Sabtida soo socota, haddii aysan ku sameyn IFA ee Berlin
IFA 2017: Dhammaan qalabka lagu soo bandhigi doono magaalada Berlin
Waxaan kuu soo bandhigeynaa soo saarayaasha iyo aalado cusub oo soo muuqan kara inta lagu gudajiro carwada IFA 2017 ee qorsheyneysa inay dhowaan ka bilaabato magaalada Berlin.
Tani waa wax walba oo aan ka ognahay soo socda Huawei Mate 10
Huawei waxyar kadib waxay soo bandhigi doontaa calankeeda cusub, Huawei Mate 10, waana tan aan horey uga ogaanay casriga cusub.
Fitbit wuxuu ku dhawaaqay Ionic, smartwatch oo ujeedkiisu yahay inuu ka adkaado Apple Watch
Fitbit Ionic waa Fitbit kii ugu horreeyay ee smartwatch dhammaystiran oo leh GPS, dareeraha garaaca wadnaha, nidaamkiisa hawlgalka u gaarka ah, iyo iska caabbinta biyaha.
Soo ogow saacadaha smart -ka ee Shiinaha ee ugu fiican oo leh tayo / qiime aad u wanaagsan si, adoo kharash yar ku bixinaya, aad u iibsan karto saacadda ugu dhammaystiran. La cusbooneysiiyay Sebtember 2021
Samsung ayaa bilaabi doonta Gear S smartwatch cusub oo ay weheliso Gear Fit 2 Pro
Madaxa qeybta mobilada ee Samsung wuxuu xaqiijinayaa in usbuuca soo socda shirkadu ku soo bandhigi doonto bandhig cusub 'Gear S smartwatch' carwada IFA 2017.
Saacadaha ugu fiican ee smartwatches
Raadinta smartwatch raqiis ah? Ha seegin xulashada saacadaha smart -ka ugu raqiisan ee suuqa. La cusbooneysiiyay Sebtember 2021
Shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Comio ayaa damacsan in ay qabsato suuqa Hindiya iyada oo soo bandhigtay saddex taleefannada casriga ah iyo nooc gaar ah oo khadka ka baxsan
Hoyga Google wuxuu hadda taageeraa xisaabaadka Spotify ee bilaashka ah
Seddex bilood ka dib, Google waxay ku darsataa taageerada xisaabaadka 'Spotify' bilaashka ah 'Google Home smart speaker', taas oo kordhineysa adeegyadeeda.
Travis tarjumaha, wehelka safarka ee habboon
Waxaan kugula talineynaa gadjet ah oo aadan ka maqnaan karin safar dibedda ah, haddii luqaduhu aysan kugu habbooneyn, Travis Translator waa wehelkaaga wanaagsan
Samsung Gear Fit 2 Pro ayaa lagu dhawaaqi doonaa iyadoo la raacayo Galaxy Note 8
Samsung Gear Fit 2 Pro wuxuu noqon doonaa aaladda Samsung ee jimicsiga cusub, wuxuuna la imaan doonaa dabagal dabaal, taageero khadka tooska ah ee Spotify, iyo inbadan.
Saacadaha ugu fiican
Soo ogow kuwa ugu fiican smartwatches suuqa. Haddii aad ka fekereyso inaad iibsato saacad casri ah, kuwani waa kuwa ugu xiisaha badan.
Waxaan kuu soo jeedineynaa xoogaa kaamirooyin ficil oo raqiis ah qaabka GoPro, laakiin aad uga jaban jeebka. Liiska ayaa la cusbooneysiiyay Sebtember 2021
Dib u eeg Meiigoo M1, 6 Gb oo RAM ah iyo Helio p20 kaliya 194 Euros
Halkan waxaan kaaga tagayaa dib-u-eegista ballanqaadka ah ee Meiigoo M1, oo ah terminaalkeeda oo leh 6 Gb oo RAM ah iyo Helio P20 ay kaa yaabi doonto. Oo kaliya 194 Euros !!.
Hogaamiyaha suuqa Xiaomi ee dharka xiran
Xiaomi wuxuu noqdaa hogaamiyaha saxda ah ee iibinta aaladaha la gashado, sirta, isku darka tayada iyo qiimaha wax soo saar kama dambeys ah oo tartan ah.
Haddii aad raadinayso kiniin raqiis ah, waxaan ku tusi doonaa mid ka mid ah kiniinnada ugu fiican wax ka yar 100 euro. Liiska ayaa la cusbooneysiiyay Sebtember 2021
Furitaanka Meiigoo M1 iyo dareenka ugu horreeya ee terminal-ka ee leh 6Gb RAM oo kayar 200 euro
Uboxing-ka Meigoo M1 iyo dareenka ugu horreeya ee boggan Android ee aan ka maqlay waxyaalo yaab leh.
Ma waxaad dooneysaa inaad iibsato qaar ka mid ah kaniiniyada ugu fiican suuqa? Halkan gal oo soo ogow waxa ay yihiin iyo astaamahooda si aad u noqoto meesha ugu sarreysa.
Halkan waxaan idinkaga tagayaa isbarbardhigga u dhexeeya Nokia 3 VS Homtom HT37 Pro, laba terminaal oo wadaaga processor-ka iyo GPU inkasta oo gebi ahaanba ay ku kala duwan yihiin qiimaha.
Ma waxaad raadineysaa telefoonnada gacanta dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan? Halkan gal oo la soco liiska 8-da mobiil ee udub dhexaadka u ah ee ay doorbidaan dadka isticmaala. Liistada la cusbooneysiiyay
Soo ogow kaniiniyada Shiinaha ee ugu fiican xilligan. Haddii aad raadineyso kiniin wanaagsan, qurux badan oo raqiis ah, ha seegin liiska la cusbooneysiiyay Sebtember 2021
Dalab xadidan! HOMTOM HT10 kaliya 114,53 Euro. Degdeg dhaqso ayey u iibiyaan!
Haddii aad ka fekereysay inaad iibsato terminaal cusub oo Android ah waxaad nasiib u leedahay maadaama aad leedahay HOMTOM HT10 kaliya 114,53 Euros oo dalab xaddidan ah.
Ticwatch waxay laabanaysaa laba saacadood oo cusub oo loo yaqaan 'Android Wear 2.0'
Tickwatch waxay soo bandhigeysaa laba smartwatches cusub oo la yiraahdo Express iyo Sport oo wata Android Wear 2.0, shahaadada IP67 iyo wax kaloo badan. Horeba Kickstarter
Dib u eegis dhameystiran oo ku saabsan Wavefun X-Pods, sameecadaha dhegaha dhegaha ee wireless-ka ah, oo aan laheyn hal xarig oo ah qaabka ugu nadiifsan ee Apple Airpods.
Doogee MIX oo si qoto dheer loogu daray bixinta caalamiga ah!
Halkan waxaan kaaga tagayaa dib-u-eegista ballanqaadka ah ee 'Doogee MIX' oo qoto dheer ka dib 10 maalmood oo ah adeegsiga degdegga ah ee ah adeegsiga shaqsi ahaaneed.
Leagoo T5 oo ku jira presale kaliya 133 Euros halkii uu ka noqon lahaa 166 Euros ee qiimaha rasmiga ah ee bilaabista. 25% dhimis!
Waxaan horey u haysannay Leagoo T5 oo ku jira presale-ka Gearbest kaliya 133 euro iyadoo laga dhimayo 25% qiimaha rasmiga ah ee laga bilaabayo oo ah 166 euro.
Mobiles-yada leh kamarada ugu fiican
Soo ogow teleefoonnada leh kamaradda ugu fiican. Haddii aad aad u jeceshahay sawir qaadista, ha seegin liiskan UPDATED ee Sebtember 2021
Mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro
Ha seegin mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro oo ku raaxayso taleefanka gacanta oo leh qiimaha ugu fiican ee lacagta. Liiska oo la cusbooneysiiyay Sebtember 2021
HOMTOM HT37 Pro oo ku jira presale kaliya 87 Euros oo leh qiimo dhimis 53% ah qiimaha rasmiga ah ee bilaabista
Hadda waxaad ku heli kartaa HOMTOM HT37 Pro oo ah presale kaliya 87 Euros waqti xaddidan
Mashruuca Fi, sharadka cusub ee Google
Mashruuca Fi waa sharad cusub oo ay soosaartay Google marka laga hadlayo shirkadaha taleefannada ee aaladaha oo dhan.
Telefoonnada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha in ka yar 100 euro
Ka taxaddar xulashada moobiillada Shiinaha ugu fiican wax ka yar 100 euro oo aad ku iibsan karto qiimaha ugu fiican ee lacagta. Liiska la cusbooneysiiyay!
Vernee Mars Pro oo ah presale kaliya 160 Euro. Cutubyo xadidan !!
Ma rabtaa inaad ku hesho Vernee Mars Pro kaliya 160 euro? Waa hagaag, waad ku degdegi kartaa inaad gasho iibka hore ee Gearbest uu sameeyo 4 maalmood.
Furitaanka Doogee Isku qas iyo Yaab !!
In this Unboxing Doogee Mix, marka lagu daro furitaanka caadiga ah iyo dareenka ugu horreeya waxaan kuu keenaynaa lama filaan wanaagsan oo aad jeclaan doontid.
Hoyga Google wuxuu horey u haystay taageero isticmaaleyaal badan gudaha Boqortooyada Midowday
Haddii aad leedahay Guri Google oo aad ku nooshahay Boqortooyada Ingiriiska, waxaad hadda ku xiri kartaa illaa lix koonto isla aaladdaas maadaama ay ku habboon tahay ikhtiyaarka isticmaaleyaasha badan.
Kodak waxay soo saartaa laba kiniin oo Android ah iyadoo lala kaashanayo Archos
Kodak Tablet 7 iyo Kodak Tablet 10, taasi waa magaca kiniiniyada cusub ee Android ee ka socda Kodak iyadoo lala kaashanayo Archos. Baro qiimahooda iyo qeexitaanadooda.
Emporio Armani waxay soo bandhigeysaa aruurinta ugu horeysa ee smartwatches
Giorgio Armani iyo Shawn Mendes waxay soo bandhigayaan ururinta smartwatch ee cusub ee Emporio Armani Iskuxirka si loo bilaabo Sebtember
Armani wuxuu bilaabayaa barnaamijkiisa gaarka ah ee loo yaqaan 'Android Wear 2.0 smartwatch' bisha Sebtember
Armani wuxuu ku dhawaaqay daahfurka Emporio Armani Connected, oo ah 'Android Wear 2.0 smartwatch' oo ay soosaartay Fossil kaas oo uusan faahfaahin dheeraad ah ka siinin.
Chromebooks-ka cusub waxay helayaan taageero ku saabsan barnaamijyada Android
Taxane cusub oo kambiyuutarrada loo yaqaan 'Chromebook' ah (oo ka kala socda Dell, Asus, Acer iyo Samsung) ayaa taageero ka helay rakibidda barnaamijyada Google Play Store.